Aza atao akanjo ho toy ny akanjo mandro ny «mpandroaka rano».
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny lamba tsy tantera-drano sy ny lamba fanadiovan-drano Amin'ny ankapobeny, ny akanjo fanadiovan-drano dia vita amin'ny lamba fanamainana rano. Ny rano dia mamorona vongan-drano amin'ny ambonin'ny lamba (Toy ny ravina lotus). Saingy, saingy tsy tena tsy tantera-drano izy io, fa mampihena ny fifohana rano ...
Inona no loko tianao kokoa amin'ny palitao amin'ny orana? Fantatrao ve ny loko azo antoka indrindra ho an'ny akanjo lava?
Inona no loko malaza indrindra amin'ny akanjo mando? Amin'ny andro orana, noho ny fahitana tsy dia tsara, dia tsara kokoa ny manao palitao misy loko mamirapiratra hampahatsiahivana ny mpandeha an-tongotra sy ireo fiara mandalo mba hifantoka bebe kokoa aminao. Toy ny mena midorehitra, mavo mamirapiratra, volomboasary, maintso sns ny palitao misy taratra taratra ...
Inona no fitaovana tsara kokoa ho an'ny akanjo orana sy ny fomba fisafidianana akanjo mafana?
Araka ny fantatsika rehetra, ny toetr'andro dia miova amin'ny vanim-potoana orana. Manahirana ny mivoaka amin'ny andro manorana. Na dia misy elo aza, dia ho lena ny pataloha sy ny kiraro, indrindra rehefa mafy ny orana sy ny rivotra, tsy ampy hiarovana antsika ny elo. Ka ilaina ny misafidy kalitao avo ...
Vehivavy palitao orana, Pu Raincoat, Ankizy Pu Raincoat, Akanjo Peva, Pvc Poncho, Pvc Raincoat,